Waxaa ka dhacday Nairobi Xaflad lagu taageerayay Maamulka Puntland, waxaana Goobta ka dhacay dagaal Qaboow oo ay isku qaadeen Maamulada ka soo kala Jeeda Gobolada dhexe ee Somaliya iyo Maamulka Puntland.
Xili lagu Jiray Xaflada ayaa waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah dadkii soo Qaban qaabiyay Xaflada oo ka sheekeeyay Taariiqdii Puntland, waxa uuna ku soo Daray Wixii dhacay 1991-dii asaga oo Xiligaas u sheegayay dadkii iskugu Yimid halkaas Ururadii ka soo Dagaalamay Somaliya sida SSDF SNM USC.
Waxa uu sheegay Mas’uulkaas in Jabhadii SSDF ay ka hor timid Dowladii dalka ka Jirtay, waxa uuna sheegay in Jabhadii USC iyo waxa uu ku sheegaya Al-Itaxaad ay soo weerareen Deegaanada Puntland asaga oo sheegay in USC afka Ciida loo daray oo la iska difaacay.
Waxaa hadalkii qaatay Cali Maxamed Geedi oo ay ka Muuqatay Caro aad u Xoogan waxa uuna Yiri.
Cali Geedi “ Waxaan rabaa in aan Runta sheego ma Jirto Jabhad ay Weyso u dhowrnayd, Ninkii ka Xuman lahaa iyo kii ku farxi lahaa, dhamaan Jabhadihii Dalka soo maray dhibaato ayay Dalka gaarsiiyeen”ayuu si kulul u Yiri Raisal Wasaarihii Hore ee Somaliya Cali Maxamed Geedi.
Wakaalada Wararka Yoobsannews oo ka soo qaaday Sawir goobta ayaa waxaa ka Muuqda Sawirka Cali Geedi oo isku dayaya in uu Gacanta kala hadlo Ninkii hadalka sheegay, waxa uuna markii Danbe soo Istaagay Goobta, asaga oo dadkii dhamaa ay u wada Riyaaqeen Hadalkiisa.
Sawirka ay soo qaaday Wakaalada Wararka Yoobsannews.com waxaa ka Muuqda in Madaxdii uu ka mid ahaa fartaag aya eegayaan Jawaabta uu Bixinayo Cali Geedi, intii uusan Tagin Goobta, asaga oo Gacanta taagayo Geedi, waxaana ka Muuqdo Sawirka in fartaag, Xaji Yaasiin iyo Mas’uuliyiinta kale ay Eegayaan Jawaabta Deg dega ah oo uu baxshay Cali Geedi intii uusan tagin Goobta lagu hadlayo.
Wakaalada Warara Yoobsannews.com
Tooshka Yoobsannews Xafiiskeeda Nairobi